राजधानीमा प्रधानमन्त्रीको गाडीमाथि फिल्मी शैलीमा आक्रमण, केछ अवस्था ? — Sanchar Kendra
राजधानीमा प्रधानमन्त्रीको गाडीमाथि फिल्मी शैलीमा आक्रमण, केछ अवस्था ?
काठमाडौँ । राजधानीमा प्रधानमन्त्रीको गाडीमाथि फिल्मी शैलीमा आक्रमण भएको छ । अज्ञात बन्दुकधारीहरूले प्रधानमन्त्रीको गाडीमाथि राजधानीमा आक्रमण गरेको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। यो लिबियाको खबर हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुलमेनेम अल–अरबीले एक विज्ञप्तिमा भने, “आज अघि, प्रधानमन्त्रीको काफिलेलाई सुक अल–जुमा जिल्ला मध्य त्रिपोलीमा लाइसेन्स प्लेट बिनाको गाडीमा सवार व्यक्तिहरूले सशस्त्र आक्रमणको शिकार बनाएको थियो।’’
आक्रमणमा कुनै हताहत नभएको पुष्टि गर्दै अल–अरबीले “देशको राजनीतिक घटनाक्रम’’ विरुद्धको विरोधपछि उक्त घटना भएको बताएका छन्।
“आन्तरिक मन्त्रालयले यस आपराधिक कार्यको निन्दा गर्दछ,“ प्रवक्ताले भने, “अपराधीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउन अनुसन्धान भइरहेको छ।
“प्रतिनिधिसभा ९संसद्०ले फाथी बाशाघालाई देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वसम्मतिले मतदान गरेको केही घण्टापछि विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।
यद्यपि, डेबिबाले मङ्गलबार उनको चुनाव नभएसम्म पदमा रहने र “निर्वाचित सरकारलाई मात्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने।“ बताएका थिए ।
उत्तर अफ्रिकी देशमा वर्षौंदेखिको राजनीतिक विभाजनको अन्त्य गर्दै गत वर्ष फेब्रुअरीमा संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित लिबियाको राजनीतिक संवाद मञ्चले डबेबाहको राष्ट्रिय एकताको सरकारलाई नियुक्त गरेको थियो।
लिबियाको संसद्ले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा डबेबाहको सरकारबाट विश्वास फिर्ता लिएको थियो र यसलाई कामचलाउ सरकारको रूपमा राखेको थियो।
लिबियामा गत वर्ष डिसेम्बर २४ मा आम चुनाव हुने भनिएको थियो तर प्राविधिक र कानुनी कारणले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो।